नेपाल र बंगलादेश भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ?
मुख्य पृष्ठखेलकुदनेपाल र बंगलादेश भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ?
शुक्रबार, २८ कात्तिक, २०७७ 0प्रतिक्रिया
विराटनगर, २८ कात्तिक । अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलअन्तर्गत शुक्रबार (आज) नेपालले बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । बंगलादेशको ढाका स्थित बंगबन्ध रंगशालामा हुने यो खेल अपराह्न ४ः४५ बजेबाट सुरु हुनेछ ।
नेपालले पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल्दा नेपाली टोली करिब नौ महिनापछि फुटबल मैदान फर्किनेछ । कतार विश्वकप छनोट अन्तर्गत दोस्रो चरणमा रहेको नेपाललाई मैत्रीपूर्ण खेल अर्थपूर्ण तरिकाले पनि हेरिएको छ ।
नेपालले घरेलु टोली बंगलादेशको सामाना गर्न लागेको हो । दुई मैत्रीपूर्ण तालिका बनाएर एक साताअघि बंगलादेश प्रस्थान गरेको नेपाली टोलीले बंगलादेशमा एक साता अभ्यास गरेको छ ।
एक साता काठमाडौंमा अभ्यास गरेर ढाका प्रस्थान गरेको नेपाली टोली शुक्रबार घरेलु टोलीविरुद्ध मैदान उत्रिँदा सुखद नतिजाको खोजीमा हुनेछ । कोरोना महामारीले निराश बनेका दर्शकलाई नेपाली खेलाडीले जित निकाल्दै खुशी दिलाउने पक्षमा छन् ।
मुजिव बर्सो सिरिज नाम दिइएको यस प्रतियोगितामा २ वटा म्याच हुनेछन् । दुई म्याचकै विजेताले ट्रफी पनि पाउने बुधबार आयोजित प्रि-म्याच कन्फ्रेन्समा जानकारी गराइएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण विश्वकप छनोट खेलहरू स्थगित भएकाले नेपाल र बंगलादेश दुवैले यो खेललाई अनुभव साट्ने अवसरको रूपमा लिएका छन् । फिफा विश्वकप छनोटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालका लागि बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेल अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको हो ।
एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले विश्वकप र एसियन कप छनोटका बाँकी खेलहरू जुन १५ सम्म सकिने जनाएको छ । यसअघि अक्टोबर र नोभेम्बरका लागि तय भएका छनोट खेल कोरोना महामारीका कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएका थिए ।
शुक्रबार बंगलादेशसँग खेल्ने लागेको नेपालले ‘हेड टु हेड’ मा निकै पछि रहेको छ । नेपाल र बंगलादेशबीच हालसम्म १९ पटक प्रतिस्पर्धा भएको छ । जसमा बंगलादेशले १२ खेल जितेको छ भने नेपालले ६ खेल मात्रै जितेको छ ।
एक खेल भने नतिजाविहीन भएको छ । तर बंगलादेशविरुद्धको पछिल्ला ५ भेटमा भने नेपालले सुखद नतिजा निकालेको छ ।